News - စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၏အရေးကြီးမှု
၁။ Optional price - အမြတ်အစွန်းကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်စားသုံးသူအုပ်စုများအရသက်ဆိုင်ရာဈေးနှုန်းများကိုဖောက်သည်များကစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိူင်သည်။
2. အထည်အလိပ် optional ကို: ထုံးစံအဝတ်အစားအသုံးပြုသောထည်လွတ်လပ်စွာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်နိုင်သည်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမှန်တကယ်အခြေအနေအရအလိုချင်သောထည်ကိုရွေးချယ်ဖို့, ထည်၏အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်များကိုအောင်မြင်နိုင်ပါသည်, အဝတ်အစားအချို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအောင်မြင်ရန်လိုနိုင်ပါသည် ထည်မှတဆင့်ပြ!
(၃) အရောင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အချိန် - အရောင်သည်ရာသီဥတု၏ထင်ရှားသောဒြပ်စင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်။ စတိုင်၏ကွဲပြားသောလက္ခဏာများအရ၊ ပိုမိုဖက်ရှင်ကျပြီး၊ ထည်အရောင်၏ဤစတိုင်နှင့်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
၄။ ရွေးချယ်နိုင်သောစတိုင်များ - ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှသီးခြားစီတီထွင်ထားသောစတိုင်လ်များမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၀ ယ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစတိုင်လ်များကိုလည်းဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်နာသည် ၀ ယ်သူနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖောက်သည်၏အကြံဥာဏ်များကိုအပြည့်အဝနားလည်ပြီးအဝတ်အထည်များအထိဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဒီဇိုင်နာသည်စတိုင်နှင့်မတူကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ရန်အတွက်အသေးစိတ်အတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်။ ဤလွတ်လပ်ခွင့်သည်အလွန်ကြီးမားသည်၊ ဖောက်သည်များသည်သူတို့အကြိုက်ဆုံးပုံစံကိုရနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စျေးကွက်ပေါ်ရှိစတိုင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲရှောင်ကြဉ်ရန်စိတ်ကျေနပ်မှုမှာပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။
၅။ ဗားရှင်းအမျိုးအစား optional - ဗားရှင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်အစားပုံစံများသည်ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုများရှိလိမ့်မည်။ အဝတ်အစားကို ၀ တ်ဆင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ရန်အတွက်ကန ဦး အောင်မြင်မှုတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ဝေမှုဌာနသည်ဗားရှင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအခြေခံလိမ့်မည်။ လုံးဝစံပြ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုရရှိရန်အတွက်အဝတ်အစားအပြင်အဆင်လုံးဝမှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်။ စျေးကွက်ရှိသာမန်အ ၀ တ်အထည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသောပုံစံများနှင့်ပုံစံများသည်လက်မှုလက်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစတိုင်ကျမှုပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီနိုင်သည်။